ဂျာမနီနှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
အကောင်းဆုံး ဂျာမနီ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်ကိုယ်စားလှယ် နှင့်ရှေ့နေများ ဂျာမနီ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားများဂျာမနီရှိနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
ဂျာမနီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်နေထိုင်ခြင်းသည်ဂျာမနီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဂျာမနီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်ခြင်း၊ ဂျာမနီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှနေထိုင်ခြင်း၊ ဂျာမနီတွင်ဒုတိယနေထိုင်မှု၊ ဂျာမနီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ , ဂျာမနီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ ဂျာမနီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်မှု၊ ဂျာမနီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဂျာမနီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်မှု၊ ဂျာမနီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဂျာမနီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနိုင်ငံသား၊ ဂျာမနီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဂျာမနီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဂျာမနီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဂျာမနီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသား၊ ဂျာမနီရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်များ၊ ဂျာမနီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဂျာမနီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်, ဒုတိယ passp ဂျာမနီရှိ ort အစီအစဉ်များ၊ ဂျာမနီနိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ဂျာမနီတွင်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဂျာမနီနိုင်ငံရှိသံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဂျာမနီနိုင်ငံမှဒုတိယအကြိမ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဂျာမနီနိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ၊ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်ရွှေဗီဇာ၊ ဂျာမနီရှိရွှေဗီဇာ၊ ဂျာမနီနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ ဂျာမနီရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်ဒုတိယရွှေဗီဇာ၊ ဂျာမနီတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ဂျာမနီရှိရွှေဗီဇာ၊ ဂျာမနီရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံ၊ ဂျာမနီရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဂျာမနီရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်ဂျာမနီ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက်ဂျာမနီတွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - ယူရို ၂၀၀,၀၀၀ (ဂျာမနီရှိရွှေဗီဇာ)
ဥရောပ၏အကြီးမားဆုံးသောစီးပွားရေးနှင့်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးနိုင်ငံ (ရုရှားပြီးလျှင်) ဂျာမနီသည်မြေယာဆိုင်ရာငွေကြေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့်အကာအကွယ်ပေးရေးအသင်းအဖွဲ့များမှအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဥရောပတိုက်တပ်များသည် ၂၀ ရာစု၏အဓိကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းတွင်ဂျာမနီကိုရေလွှမ်းမိုးစေခဲ့ပြီး ၁၉၄၅ တွင်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည့်အမေရိကန်၊ ယူကေ၊ ပြင်သစ်နှင့်ဆိုဗီယက်တို့၏မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များပါဝင်သောနိုင်ငံကိုစွန့်ခွာသွားခဲ့သည်။ အနောက်ပိုင်းသောအဓိကဘဏ္financialာရေးနှင့်လုံခြုံရေးအသင်းများ၊ EC (လက်ရှိအီးယူ) နှင့်နေတိုးတို့သည်ဆိုရှယ်လစ် GDR သည်ဆိုဗီယက်မောင်းနှင်ခဲ့သောဝါဆောစာချုပ်ကိုဖြတ်တောက်နေစဉ်။ ထိုအချိန်ကတည်းကပင်ဂျာမနီသည်အရှေ့ပိုင်းထိရောက်မှုနှင့်လုပ်ခများကိုအနောက်နိယာမများနှင့်ကိုက်ညီစေရန်ကျယ်ပြန့်သောပိုင်ဆိုင်မှုများသုံးစွဲခဲ့သည်။ ၁၉၉၉၊ ဇန်နဝါရီလတွင်ဂျာမနီနှင့်အခြားအီးယူနိုင်ငံ ၁၀ ခုသည်ဥရောပကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာပုံမှန်ငွေသားယူရိုကိုပေးခဲ့သည်။
အနောက်ကမ္ဘာမှကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုအရဂျာမနီသည်နေထိုင်ရန်ကျိုးနွံမှုရှိသည်။ အကြံပေးကုမ္ပဏီ Mercer ၏မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ချက်အရဘာလင်မြို့တော်ကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိအကဲဖြတ် ၂၀၀ တွင်အနက် ၁၀၆ ခုမြောက်အကုန်အကျအများဆုံးမြို့အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်လန်ဒန်သည်နံပါတ် ၁၂ ဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇလန်မြို့ပြဒေသသုံးခုဖြစ်သောဇူးရစ် (၃)၊ ဂျီနီဗာ (၅) နှင့်ဘာ့ (၉) တို့ကအကောင်းဆုံးနံပါတ် ၁၀ နေရာတွင်ရှိသည်။
သင်ဘာလင်တွင်နေထိုင်သည်ဆိုပါစို့၊ ဆွစ်ဇလန်ဆွစ်ဇာလန်၏သဲကျောက်ပုံစံသည်အိမ်ပြင်တွင်စံပြရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ မြူးနစ်နှင့်အနည်းငယ်အကွာအဝေးကိုစွန့်စားပြီးသင် Starnberg ရေကန်ရှိအဖိုးတန်ကျောက်ရေတွင်းထဲသို့ခုန်ကူးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင် Cologne ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းအပေါ်, သင် Rhine ဆင်းဆင်းလှေကိုသွား ... သင်သွားအဖြစ်တိုင်းပြည်၏ကျော်ကြားသောဝိုင်ဒေသသို့သွားရောက်နိုင်ပါတယ်။
မြောက်ဘက်ရှိဟမ်းဘတ်မှတောင်ဘက်ရှိမြူးနစ်သို့ရောက်ရန်မှာ ၆ နာရီကြာသည်။ ဒါ့အပြင် ICE အမြန်ရထားပေါ်မှာပျမ်းမျှအောက်ကိုတက်နေခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မတူကွဲပြားတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာလိုင်းရဲ့ထိပ်ဆုံးနေရာကိုရနိုင်မယ့်သက်သောင့်သက်သာရှိပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့အခန်းမှာသင်အိပ်မောကျနေတဲ့ခြေထောက်တွေကိုအနားယူဖို့အခွင့်အရေးရလိမ့်မယ်။
နိုင်ငံများစွာတွင်ရိတ်သိမ်းချိန်၌စတင်ရက်များသည်စတင်ဆွဲဆောင်သည့်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောရာသီဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဆောင်းရာသီသည်ဂျာမနီတွင်အလွန်ရှည်လျားသောဟန်ရှိသည်။ သို့သော်ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ မြို့ပြဒေသများကိုနိုဝင်ဘာလနှောင်းပိုင်းကတိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းရှိမြို့များ၏အချက်အချာနေရာများသို့ခရစ္စမတ်ပြပွဲများဖွင့်ပြသောအခါ ပို၍ အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသောနှစ်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောအခမ်းအနားများသည်သင်၏နှစ်စဉ်တရားဝင်ခွင့်ယူမှုနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ဒါ့အပြင်areasရိယာအနည်းငယ်ဟာဒီရက်တွေနဲ့အတူအံ့ liber စရာကောင်းလောက်အောင်လွတ်လပ်မှုရှိပါတယ်။
တောင်ပိုင်းရှိ Bavaria ပြည်နယ်ရှိရေတွင်းသည်နှစ်စဉ်လူအများ ၁၃ ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ရက်ပေါင်း ၃၀ ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာအဖွဲ့အစည်းများစွာကိုစံအဖြစ်ပေးဖို့စွန့်လွှတ်လိုက်ရင်၊ ဂျာမနီနဲ့ပတ် ၀ န်းကျင်နိုင်ငံတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့နောက်ထပ် ၁၄ ရက်ထပ်တိုးဖို့မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။
အတော်လေးခိုင်မာသောစီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့်ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်အလုပ်အသစ်တစ်ခုကိုရှာရန်မှာအခြားအနောက်နိုင်ငံများထက် ပို၍ လွယ်ကူသည်။ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းသည် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းချိန်ကတည်းကအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဘွဲ့ရသူများသည်အထူးကောင်းမွန်သောရာသီရှိသည် - ဘွဲ့ရများ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသာသူတို့စဉ်းစားထားသည့်အရာနှင့်အဆက်ပြတ်နယ်ပယ်တွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
သင်ဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းကချိတ်ဆွဲခဲ့ဖူးတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုမှာသင်ဟာဖိနပ်ကိုကျင်းပနေပြီးစိတ်ဖိစီးမှုမဖြစ်စေပါနဲ့။ ဂျာမနီမှာသင်စားပွဲကိုခေါ်ဆောင်လာဖို့အများကြီးရှိတယ်။ Bundesrepublik သည်အရွယ်မရောက်သေးသောမိဘများအတွက်လူမှုရေးထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဆိုင်ရာလစ်ဘရယ်အစီအစဉ်ရှိသည်။ အသစ်သောအမေများနှင့်ဖခင်များသည် ၁၄ လတာကာလအတွင်းသူတို့အကြားလစာယူခွင့်ရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ သင့်ကလေးများအားအသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်သည်အထိဂရုစိုက်မှုအတွက်ပြည်နယ်မှသင့်အားငွေသားပေးလိမ့်မည်။
သင်၏ကလေးငယ်အသက်တစ်နှစ်ပြည့်သည့် နေ့မှစ၍ သူငယ်တန်းမှစိတ်ချရသောနေရာတစ်ခုရရှိသည်။ ၎င်းသည်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်သည့်နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ကုန်ကျစရိတ်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။
ဂျာမနီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
ယူရို ၂၀၀,၀၀၀ (ဂျာမနီရှိရွှေဗီဇာ)
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ ဂျာမနီ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်စီးပွားရေးဗီဇာ (ရေတို / ရေရှည်) / နေထိုင်ခွင့်
ဂျာမနီ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အချိန်ထုတ်ယူခြင်း
တည်းခို၏ 8 နှစ်ပြီးနောက်
စီးပွားရေး / စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ဂျာမန်အဖွဲ့အစည်းမှတဆင့်အလုပ်အကိုင်များဖန်တီးပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ အရေးကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်လုပ်နေကြသည်။
> လူ ဦး ရေပြောင်းလဲမှု
> ငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အာမခံလုပ်ငန်း)
> သင်္ဘော၊ ရေကြောင်းသဘောင်္
> အိုင်တီလုပ်ငန်း (software, data and consulting)
အဘယ်ကြောင့်ဂျာမနီ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ဘို့သွားရ
ဂျာမနီသည်နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးအင်အားနှင့်စီးပွားရေးအလားအလာအရကမ္ဘာပေါ်ရှိအရေးအကြီးဆုံးနိုင်ငံများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အနောက်နိုင်ငံများတွင်အခြေခံအဆောက်အ ဦး များ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးခံစားခွင့်များရှိသည့်အကြီးဆုံးသောနိုင်ငံဖြစ်ပြီးဥရောပသမဂ္ဂနှင့် Schengen ဒေသ၏အဓိကအဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်သည်။ BYou နှင့်သင်၏မိသားစုဝင်များသည်ဂျာမနီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ Schengen ဒေသရှိဥရောပနိုင်ငံများနှင့်ဥရောပသို့ကျန်နိုင်ငံများအားလုံးကိုဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းဖြင့်အချိန်တိုအတွင်းဂျာမန်နိုင်ငံသားဖြစ်လိမ့်မည်။ ကိုယ်ထိလက်ရောက်နေထိုင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်သင်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခွင့်ရှိသည်။
နောက်ထပ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလိုအပ်ချက်မရှိပါကသင်၏ဂျာမန်နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုချက်၏အကျိုးခံစားခွင့်ကိုသင်၏အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အသေးစားကလေးများအပါအ ၀ င်သင်၏အနီးကပ်မိသားစုဝင်များသို့တိုးချဲ့နိုင်သည်။ သင်၏နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့်သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများအတွက်မိသားစုစည်းလုံးမှုပေါ် မူတည်၍ မှီခိုခွင့်ပြုချက်ကိုသင်လျှောက်ထားလိမ့်မည်။
Residency ဂျာမနီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် insite
သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကိုသင်၏ရရှိနိုင်သောငွေပမာဏနှင့်တရားဝင်ရရှိထားကြောင်းသင်မှတ်တမ်းတင်ရမည်။ သင်နှင့်သင့်မိသားစုကိုထောက်ပံ့ရန်ငွေကြေးအနည်းဆုံးယူရို ၃၀,၀၀၀ အတွက်ငွေရေးကြေးရေးနည်းလမ်းများလည်းလိုအပ်သည်။ စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးပြီးဆုံးပြီးနောက်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်ဒေသတစ်ခုလုံးအတွက်အကျိုးရှိမည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသောအခါသင်၏ခွင့်ပြုချက်ကို ၆-၈ လအတွင်းသာပေးလိမ့်မည်။ ပါမစ်သည်သင့်အားဂျာမန်နိုင်ငံသားများနှင့်ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွင်မဲပေးခွင့်ရပြီးရာထူးအတွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးများအပြင်တူညီသောအခွင့်အရေးကိုပေးလိမ့်မည်။
ဂျာမနီတွင်တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် ၅ နှစ်ရှိလျှင်အခြေချနေထိုင်ရန်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ဂျာမန်နေထိုင်ခွင့်ရရှိရန်လိုအပ်သည်မှာသင်၏စီးပွားရေးသည်ဒေသတစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်အကျိုးရှိသည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ၊ သင်သည်ဂျာမန်ကုမ္ပဏီတစ်ခု (အသစ်သို့မဟုတ်လက်ရှိကုမ္ပဏီ) တွင်ယူရို ၁ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နှင့်ဂျာမန်နိုင်ငံသားများအတွက်အလုပ် ၁၀ ခုဖန်တီးရန်နှင့်သင်၏လျှောက်လွှာအတွက်ဒေသခံစပွန်ဆာပေးရန်မလိုအပ်ပါ။
ဂျာမနီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် ဂျာမနီများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ဂျာမနီအဘို့ ဂျာမနီမှဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုဂျာမနီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ထောက်ခံမှု၊ ဂျာမနီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှထောက်ပံ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဂျာမနီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဂျာမနီမှ Golden Visa ဖြင့်နေထိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဂျာမနီမှဖြစ်စေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုသာကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ သင်သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လိုပါကအပြည့်အဝဖြေရှင်းနိုင်သည့်အတွက်ဂျာမနီမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုကူညီသည်။ ဂျာမနီသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ဂျာမနီရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်ဂျာမနီအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ဂျာမနီအတွက်, ဂျာမနီအတွက်တတ်နိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ရပျ, ဂျာမနီများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင် Residency, ဂျာမနီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကတတ်နိုင် Residency နှင့်ဂျာမနီများအတွက်တတ်နိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီ
ဂျာမနီမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
ဂျာမနီရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာ။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဂျာမနီမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း။
ဂျာမနီမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
ဂျာမနီမှ ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
ဂျာမနီနိုင်ငံရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
ဂျာမနီမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ဂျာမနီနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
ဂျာမနီမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဂျာမနီ Residency
ဂျာမနီနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေ၏နေထိုင်မှုသည်သင်၏အောင်မြင်သောနေထိုင်မှုအတွက်ဂျာမနီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ ဂျာမနီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ ဂျာမနီမှသို့မဟုတ်ဂျာမနီသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင့်လိုအပ်ချက်ကိုနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency ကိုဂျာမနီနိုင်ငံရှိ Residence Permit ကိုရယူရန်နှင့်ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ Residence Permit ကိုရယူရန်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်အကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်အစီရင်ခံစာကိုပြင်ဆင်သည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံအတွက်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency နှင့်အတူဂျာမနီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့သို့လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်အတွက် client နှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့် Apostille ဂျာမနီနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ဂျာမနီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ရွှေဗီဇာများကဖြည့်စွက်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ဂျာမနီရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားဂျာမနီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများမှ Residency ကိုထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဂျာမနီများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်ဂျာမနီမှလက်နက်များနှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဂျာမနီများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖွငျ့ဖွစျသညျ ဂျာမနီ၌နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဂျာမနီသို့ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဂျာမနီများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် ဂျာမနီရှိမည်သည့်တရားမဝင်သို့မဟုတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအတွက်မဆိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ဂျာမနီအဘို့ ဂျာမနီရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဂျာမနီများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဂျာမနီရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ဂျာမနီအတွက်ကုန်သွယ်မှု၊ ဂျာမနီ၌သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့အတွက်ဂျာမနီအတွက်လူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အထောက်အပံ့မရနိုင်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ဂျာမနီအဘို့ တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ဂျာမနီအဘို့ ဂျာမနီရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဂျာမနီ ဂျာမနီရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် ဂျာမနီရှိရှေ့ရပျ ဂျာမနီရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ဂျာမနီနှင့် KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျမှန်ကန်စေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ ဂျာမနီရှိအာဏာပိုင်များမှလျှောက်ထားမှုကိုခွင့်ပြုခြင်းအတွက်ငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် ဂျာမနီမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
International Residency မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်ဂျာမနီ၏တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်များအားဖြင့်ကျွနု်ပ်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျာမနီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဂျာမနီအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုဂျာမနီအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသည့်ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် dual Residency အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။
ဂျာမနီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့ရွက်များနှင့်ဂျာမနီအတွက်တရား ၀ င်ကိုယ်စားလှယ်များသည်ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသောအတွေ့အကြုံရှိသည်။
သင်၏နေထိုင်ခွင့်ဂျာမနီမတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်ဂျာမနီအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့အတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency တွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများရှိပြီးဂျာမနီအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုကူညီသည်။
အမှု၌၊ သင်၏ဂျာမနီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်သင်၏ Residency ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
ဂျာမနီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်
Residency ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဂျာမနီနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်တွက်လျှင်မိသားစု ၀ င်များနှင့်အသက်အရွယ်များကိုအသေးစိတ်ဖြည့်ပါ။ ဂျာမနီအတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ဂျာမနီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များအပါအ ၀ င်အခြားကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ဂျာမနီအဘို့
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူဂျာမနီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျာမနီအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေနှင့်၊ သင်တတ်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းများဖြင့်ဂျာမနီ၌သင်နှင့်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
ဂျာမနီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းမှ Residency မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျာမနီ၌စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းပေးသည်။ ၎င်းကိုဂျာမနီအတွက်အခြားအကြံပေးများမှပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဂျာမနီနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းဖြစ်စေသည်။
ဂျာမနီရှိမိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဂျာမနီနှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏ Residency ကို ကျော်လွန်၍ ဂျာမနီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ဂျာမနီမှာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် or Offshore နှင့် 106 နိုင်ငံများ (ဂျာမနီတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
ဂျာမနီသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချသူမည်သူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ဂျာမနီရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ်အကောင့် ဂျာမနီရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, ဂျာမနီအတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် ဂျာမနီမှာဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် ဂျာမနီရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် သငျသညျဖို့စီစဉ်ထားလျှင်ဂျာမနီ ဂျာမနီရှိလက်ရှိစီးပွားရေးကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ ဂျာမနီမှာချက်ချင်းစတင်ဘို့။
ဂျာမနီရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ ဂျာမနီရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ဂျာမနီမှာနေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဂျာမနီအတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
ဂျာမနီအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ ဂျာမနီများအတွက်ကို virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, ဂျာမနီအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
ဂျာမနီရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
ဂျာမနီရှိ Setup လုပ်ငန်း
ဂျာမနီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဂျာမနီ.
အောက်ဖော်ပြပါ IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုဂျာမနီနိုင်ငံတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည်
ဂျာမနီရှိ web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဂျာမနီရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဂျာမနီရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဂျာမနီရှိ Software များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဂျာမနီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျာမနီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖြေများအားဖြင့်တရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဂျာမနီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ဂျာမနီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ဂျာမနီတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ ဂျာမနီတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျာမနီနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်သည်၊
ဂျာမနီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency မှသင်၏ကိုယ်စားဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးအတွက်ဂျာမနီအတွက်ရှေ့နေသည်လိုအပ်သည်။ သင်သည်ဂျာမနီသို့ရောက်နေလျှင်သို့မဟုတ်ဂျာမနီသို့လာရောက်ရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ရှေ့နေအားဤတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အဝေးမှဂျာမနီအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းစတင်ရန်စီစဉ်ပါကဂျာမနီပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်တရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်အက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်ဂျာမနီကောင်စစ်ဝန်ရုံးကတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။
အမေးများသောမေးခွန်းများ - ဂျာမနီနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကနေထိုင်ခြင်း
ဂျာမနီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းကိုဂျာမနီ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့်ဂျာမနီ၏နေထိုင်ခွင့်ရရှိခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဂျာမနီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဂျာမနီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဂျာမနီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ခွင့်၊ ဂျာမနီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ဂျာမနီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ဂျာမနီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ဂျာမနီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်နှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများကကူညီခြင်း ဂျာမနီမှာ။
ဂျာမနီနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် ဂျာမနီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခွင့် ဂျာမနီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်မှု | ဂျာမနီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှနေထိုင်ခွင့် ဂျာမနီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကနေထိုင်မှု
ဂျာမနီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုဂျာမနီစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည့်နည်းများဖြင့်ဂျာမနီ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဂျာမနီ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဂျာမနီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဂျာမနီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဂျာမနီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်ဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ဂျာမနီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများမှနိုင်ငံသားနှင့်ဂျာမနီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ဂျာမနီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ဂျာမနီရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီများ
စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ | ဂျာမနီရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေရှေ့နေဂျာမနီ | ဂျာမနီရှိစျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံဂျာမနီ | စျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများအတွက်ဂျာမနီ
ဂျာမနီနိုင်ငံရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုဂျာမနီ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းစသည်ဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုဂျာမနီနိုင်ငံသို့လျှောက်ထားသည်။ ဂျာမနီအတွက်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဂျာမနီရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်ဂျာမနီနိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံများ၊ ဂျာမနီနိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဂျာမနီမှာအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီများမှတဆင့်။
ဂျာမနီအတွက်ဒုတိယအနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု | ဂျာမနီရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ ဂျာမနီနိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဂျာမနီနိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဂျာမနီနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်
ဂျာမနီရှိရွှေဗီဇာကိုအစိုးရ၏ငွေချေးစာချုပ်၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည့်နည်းများဖြင့်ဂျာမနီစီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဂျာမနီ၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရယူခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဂျာမနီသို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ ဂျာမနီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ ဂျာမနီရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်ဂျာမနီအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ဂျာမနီရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဂျာမနီရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ဂျာမနီအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
ဂျာမနီအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ဂျာမနီရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ဂျာမနီရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဂျာမနီရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဂျာမနီအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
ဂျာမနီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
Residency အတွက်ဂျာမနီ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ယူရို ၂၀၀,၀၀၀ (ဂျာမနီရှိရွှေဗီဇာ) ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဂျာမနီရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်ဂျာမနီမှအေးဂျင့်များသည် Residency ကိုဂျာမနီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပံ့ပိုးသည်။
ဂျာမနီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ဂျာမနီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များကြောင့် Residency သည်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency မှဂျာမနီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြေးကိုသာပေးရသည်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် Residency အတွက်အခြားအထောက်အပံ့များစွာကိုလည်းပေးသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုမည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအနည်းငယ်မှာအာရှမှဂျာမနီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အာဖရိကမှဂျာမနီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဥရောပမှဂျာမနီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ တောင်အမေရိကမှဂျာမနီသို့နေထိုင်မှု၊ မလေးရှားမှဂျာမနီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှဂျာမနီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှဂျာမနီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ သီရိလင်္ကာမှဂျာမနီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ နီပေါမှဂျာမနီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အိန္ဒိယမှဂျာမနီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Residency ယူအေအီးမှဂျာမနီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု ဂျာမနီအဘို့
ဂျာမနီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ
တရားရေးနှင့်စားသုံးသူကာကွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန www.bmjv.de
မိသားစုကိစ္စရပ်များအတွက်ဗဟိုအစိုးရ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ အမျိုးသမီးများနှင့်လူငယ်များ - www.bmfsfj.de
သဘာဝပတ် ၀ န်းကျင်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊www.bmub.bund.de
link ကိုမှ ဂျာမနီလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန , ဂျာမနီမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရှိန်မြှင့်များအတွက်မူဝါဒများရေးဆွဲတာဝန်ရှိသည်